Deeqda waxbarasho ee caqliga leh
Kooxda 'Wisdompowder' waxay si wanaagsan ula socdaan kharashyada badan ee la xiriira tacliinta sare, iyadoo inbadan oo inaga mid ah aan ku lug leenahay arinta lafteena. In kasta oo waxbarashada kuleejyada iyo jaamacaduhu ay sii kordhayaan, ardayda iyo qoysaskooda ayaa had iyo jeer looga tegayaa iyaga oo leh mas'uuliyado maaliyadeed oo muhiim ah si looga gudbo.
Shirkadeena waxay aaminsan tahay in tacliinta sare ay muhiim tahay waxayna dooneysaa inay dib u siiso oo ay siiso dadka kale qaabkii ay ugu sii wadan lahaayeen waxbarashadooda tacliinta. Shirkaddayadu waxay go’aansatay inay u abuurto barnaamij deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda wax-barata iyo ardayda ka qalin-jabisa si ay uga caawiso la-kulanka kharashyadooda la xiriira waxbarashadda. Waxaan siineynaa deeq waxbarasho oo ah $ 1,000 arday cusub sanad walba. Hadafkayagu waa inaanu caawino ardayda inta sanadaha badan ah ee suurtogalka ah waana sababtaas awgeed deeq-deeqeena ayaa sii socon doona sannad kasta.
Qadarka deeqdan waxbarasho waa $ 1000 waxaana lagu siin doonaa hal arday kharashaadka waxbarashadooda.
Ayaa U qalma deeqda waxbarasho?
Si looga qeyb qaato tartanka deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudahan soo socda:
Dhammaan codsadeyaasha waa in la qoraa, ama in la qoraa, arday buuxa ah kulleejo ama jaamacad la aqoonsan yahay oo ku taal Mareykanka simistarka ay codsanayaan inay helaan deeqda waxbarasho.
2.Waa inaad ku jirtaa aqoon wanaagsan oo aad la leedahay hay'addaada waxbarasho ee hadda
3. Codsadeyaasha ka yar 18 sano, waa inaad ogolaansho ka haysataa waalid ama ilaaliye sharci
4 wuxuu leeyahay ugu yaraan 3.0 GPA (miisaanka 4.0)
5.Waa inaad ku dalbataa tartanka emayl oo aad ku siisaa magacaaga iyo magaca hay'adda aad ka qaybgalayso ama qorshaynayso inaad ka qaybgasho.
Waa kuwan tillaabooyinka lagu codsan karo barnaamijka deeq-waxbarasho:
1.Qor curis ah 1000+ erey oo ku saabsan mowduuca "Maxay maskaxda kaabistaa sameyn kartaa mana qaban karto?"
2.Waa inaad soo gudbisaa qoraalkaaga kahor ama kahor Maarso 31st, 2020.
3.Dhammaan codsiyada waa in loo diraa [emailka waa la ilaaliyay] qaab Qaabeed kaliya. PDFs ama Xiriirinta Google Docs lama aqbali doono.
4.Waa inaad ku xustaa magacaaga buuxa, magacaaga jaamacadeed, lambarka taleefanka, iyo cinwaanka iimaylka ee ku jira arjiga deeqda waxbarasho.
5. Hubso in qoraalkaagu yahay mid gaar ah oo hal-abuur leh.
6.Plagiarism-ka looma dulqaadan doono, haddii aan ogaanayna inaad ka soo guurtay maqaalka meel kale markaa dalabkaaga isla markiiba waa la diidayaa.
7.Waa inaadan bixin macluumaad kale oo aan ka aheyn tan aan kor kusoo sheegnay.
8.Markuu waqtiga kama dambaysta ah ee codsigu dhammaado kadib, kooxdayadu waxay xukumi doonaan qoraalkaaga hal-abuurka, qiimaha aad soo bandhigtay, iyo fikirkiisa.
9. Ku guuleystayaasha waxaa lagu dhawaaqi doonaa Abriil 15th, 2020 waxaana guuleystaha lagu ogeysiin doonaa emayl.
Sidee Dib U Eegista Codsiyada?
Hawlahaaga waxaa qiimeyn doona maareeyayaasha mashruuca ee bixiya latalin xirfad leh oo ku takhasusay khabiirada yaryar ee shirkaddayada. Waxaan xushmeyneynaa asturnaantaada waligeedna u muujin mayno macluumaadkaaga xiriirka dhinac saddexaad, umana adeegsan faa'iidadeena qaab nooc kasta ah. Hase yeeshe, waxaan xaq u leenahay inaan ku isticmaalno fikradaada mashruucyadayada gurigaga ah.
Kaqeybgalkaaga deeqda waxbarasho ee Discpopoder.com waa ikhtiyaari oo waxaad dooran kartaa inaad kaqeybqaadato. Si loogu tixgeliyo deeqda-waxbarasho ee ay heshay shabakadda 'Wisdompowder.com', waxaa suuragal ah in lagaa codsado inaad ku gudbiso xogta elektiroonig ahaan.
Codsigaagu wuxuu ku deeqayaa Wisepowder.com, wakiiladiisa iyo / ama ogolaanshaha wakiilada inay adeegsadaan oo ku dhajiyaan macluumaadka soo socda: magaca codsadaha, tagida kuliyada, sawirka koleejka, emaylka, qadarka abaalmarinta iyo qormada shabakada Wisdompowder.com ama isgaarsiinta suuq geynta, oo ay kujirto laakiin kuma koobna websaydhka, joornaalada, warbaahinta bulshada iyo joornaalada.
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga xiriirka si aan u xaqiijino helitaanka dalabkaaga, si aan u soo aruurino macluumaad dheeraad ah haddii ay jiraan su'aalo ku saabsan dalabkaaga, in aan kuu soo dirno ogeysiisyo la xiriira xaaladdaada, ama xiriirinta lama huraanka ah ee la xiriirta dalabkaaga.
Dhammaan macluumaadka xasaasiga ah ee laxiriira u qalmida codsadaha oo dhan waa la baabi'iyaa isla marka la xaqiijiyo guuleystaha oo la shaaciyo. Cinwaanka emailka codsadayaasha ama lambarka taleefanka looma adeegsan doono ujeedo suuqgeyn.